Emo style eyeliner ဆိုးနည်း | YUYU BEAUTY
You are at:Home»Makeup»Emo style eyeliner ဆိုးနည်း
Emo style eyeliner ဆိုးနည်း
By on	 01/08/2016 Makeup
ခပ်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သော Emo girlsလေးများနှင့် ဂျစ်ကန်ကန် ကောင်မလေးများအားလုံအတွက် eye liner ဆိုးနည်း အဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
1.gel linerကို အသုံးပြုပါမည်။
ခဲတံအမဲဖြင့် အောက်မျက်လုံးအတွင်းပိုင်းတွင် ဆိုးပေးပါ။
ခဲတံအမဲဖြင့် မျက်လုံးအပေါ်ပိုင်း၏ အတွင်းပိုင်းကို ဆိုးပေးပါ။
မျက်လုံးတောင့်တွင် အဖြူရောင်အလက်ကို ဆိုးပေးပါ။
အသုံးပြုတဲ့ Cosmetics များပါ။
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
Withalight, silky texture Then spreadalittle cream gently with fingertips to hide the dark spots on the face or dark circles under the eyes. To cover smooth and natural. Say goodbye to bug A pretty face to be the same.
NARS Eyeliner Pencil – Black Moon
Intense pigments of longwearing eyeliner color that glide on smoothly for precision definition and lash thickening effects. The creamy texture is ideal for blending, smudging, or pairing with powder eyeshadows.
Sivanna colors fantastic blusher in6vibrant colors. Smart black design pot. Great value! All colors were photographed in bright sunlight. Shades will appear slightly more subdued in dull lighting conditions and under indoor lighting.
Makeup Recent Posts
How to Make A Sponge and Foundation
မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ Sponge ကလည်း မကောင်းတော့ဘူးဆို ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ကြမလဲ…
Everyday Makeup Tutorial Morphe 35F
Eyeshadow ကိုအဓိကပြထားသော Tutorial လေးကို အောက်မှာဝင်ကြည့်ပေးနော်။…
Makeup foundation tutorial
makeup ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ပြီးလိမ်းရမလဲဆိုတာကို ပျိုမေများအတွက် တစ်ဆင့်ချင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ 1.မျက်နှာစလိမ်းပါမယ်…
Bella Sugar Lips & Red Carpet Collection ထဲကအကြိုက်ဆုံးသုံးရောင်ကို Review ရေးပေးထားပါတယ်။
မမတွေညီမလေးတွေလည်း ဒီ Tutorial လေးကို ကြည့်ပြီး…
Dinner makeup lookလေးကို အဆင့်ဆင့်လေးခြယ်ပြထားလို့ ချစ်တို့လိုက်ပြင်ကြည့်လို့…
လူငယ်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ မိတ်ကပ်သားပါးပါးလေးနဲ့ ရိုးရိုးလေးဖြစ်အောင်ချယ်သပြင်ဆင်ပုံကို တစ်ဆင့်ချင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ 1.မျက်ခုံးမွှေး…
>> More Makeup Posts
ရေညှိစိမ်းရောင် Eye shadow ခြယ်နည်း
Honey’s Black Smokey Eye
How I get Glass Skin Eyeshadow?
3 Minutes Eyeshadow
Easy Every Smoke Eye
Three Hairstyles That Suit With Every Fashion
Eyebrows & Lip tutorial
Eyebrows & Eye shadow Tutorial
Home-made Lip Moisturizer & Lip Balm
Natural Gradient Lips Style & Full Lips
Lipliner and Lipstick Tutorial
Everyday Simple Makeup Look
Best Contouring Makeup Tutorial